Xadhkaha Badbaadada, Xadhkaha Qufulka Badbaadada, Xadhkaha Badbaadada Guga - Linhui Hardware
YuYao Lin Hui Plastic Hardware Factory waxaa la aasaasay 2006. Waa shirkad casri ah oo ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, wax-soo-saarka, iibinta iyo adeegga fiilada badbaadada ee whipcheck, Whiplock, Whipblock, Xaraashka sharabaadka, Tuubbada xajinta, Hose Hobbles, gariiradda guga lanyard, Silsilad qarax tuubo, cable cadaymaha qarxa, Birta birta xadhig, birta birta xadhig jiido, xadhig birta ah, Customization Product, Silsiladda riging.Shirkaddu waxay leedahay koox design xirfadeed iyo hawlwadeeno xirfad leh, oo leh awood farsamo oo xoog leh. Alaabooyinka si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa dhammaan gobollada iyo magaalooyinka dalka waxayna yihiin alaab-qeybiyeyaal muddo dheer ah shirkado caan ah.
Whipchek - dharbaaxayaasha badbaadada ayaa ah badbaado togan - waardiyeeya isku xirka tuubooyinka. Xadhkaha birta ah ee xoogga leh waxay ka hortagaan tuubada tuubada haddii ay dhacdo kala go'a isku-xidhka ama qalabka isku-xidhka si lama filaan ah.
Mid ka mid ah xal si looga ilaaliyo tuubada ugu danbeyn karbaash waa in la isticmaalo nidaamka xakamaynta tuubada. Nidaamyada xajinta tuubada waxaa loogu talagalay inay ka hortagaan garaaca tuubada cadaadiska leh haddii ay dhacdo tuubada ka soocaysa ku-habboonaanta.
Xaqiiji dhammaan tuubooyinka, qalabka lagu rakibo, iyo aaladaha badbaadada ee lagu qiimeeyay shuruudaha gaarka ah oo hubi dhammaan walxaha si aad u hubiso inay si habboon u shaqeeyaan.
Hose Hobbles sidoo kale loo yaqaan xirmooyinka tuubooyinka waxaa loo isticmaalaa in lagu sugo darafyada tuubooyinka wareega iyo kuwa kale ee cadaadiska sare si looga ilaaliyo shil haddii ay dhacdo in isku xirka tuubada uu xumaado.
Waxay ka samaysan tahay polyurethane heer sare ah iyo silig bir ah, kaas oo leh iska caabin aad u wanaagsan oo ku habboon hawlaha kalluumeysiga ee kala duwan.
Soo hel xadhig jiid jiid xagga dambe ee baabuurka jiidaya iyo xagga hore ee baabuurka la jiiday. Qaboojiyayaal badan ayaa ku yaal qaybta hoose ee bambarka, waxaana badanaa si cad loogu calaamadeeyay buug-gacmeedka gaariga.
Xadhkaha Nabdoonaanta Cagaha ee Gogol-xaareedka, ee loogu talagalay Beddelka Go'aya Fiilada Trailer Cable, Cable-ka-Lumay, Rv Bir-la'aanta Guga Jiidtay Siliga Caabuqa ee La fidiyay
Alaabooyinka si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa dhammaan gobollada iyo magaalooyinka dalka waxayna yihiin alaab-qeybiyeyaal muddo dheer ah shirkado caan ah.
xajin la go'i karo oo ka shaqaynaysa cadaadiska sare h...